Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Tonizia » Mövenpick Hotels & Resorts dia mitondra any amin'ny banky ny fanarenana ny fizahan-tany any Tonizia
Ireo mpizahatany-sary-for-sary-ao afovoan-tanànan'i Tunis
Ity no taona fanarenana tena ho an'ny indostrian'ny fizahantany any Tonizia. Moevenpick Hotels and Resorts androany dia nilaza fa manamafy ny fiarovana azy io ao Tonizia amin'ny alàlan'ny fandraisam-bahiny hotely ankehitriny ao amin'ny tanàna amoron-tsiraka Sfax. Ny orinasan'ny fandraisam-bahiny Suisse dia nanao sonia fifanarahana tamin'i Société Touristique du Sud hitantanana ny Plaza Sfax & Spa Hotel, fananana ambony any amin'ny foibe misy ny tanàna eo amin'ny Rue Khalid Ibn Walid, akaikin'ny Medina manan-tantara. Dia lavitra ny hotely mankany amin'ny ivon-toeran'ny fivoriambe, famantarana iray hafa koa ny MICE, antenaina hijery an'i Tonizia indray ny indostrian'ny fihaonana sy ny insentif.
Hotely Plaza Sfax & Spa, Tunis
Toa hita fa nisondrotra indray ny indostrian'ny fizahantany any Tonizia. Taorinan'ny fanafihana mahery vaika marobe amin'ireo ivon-toeram-pizahantany dia miezaka mafy ny ho lasa toerana ankafizin'ny eropeana indray ity firenena afrikanina avaratra ity. Taloha dia alemà sy frantsay no nanjakazaka tamin'ny isan'ny mpitsidika an'ity firenena Mediteraneana ity.
"Misy fanatsarana lehibe", hoy ny minisitry ny fizahantany Selma Elloumi Rekik tamin'ny fampahalalam-baovao tamin'ny herinandro lasa teo. Ny isan'ny mpitsidika dia nisondrotra ny dimy volana voalohany tamin'ny 2014, indrindra noho ny fiakaran'ny fahatongavan'ireo Rosiana sy Sinoa.
Nanimba ny sehatry ny fizahantany Tonizia ny fanafihana jihadista tamin'ny 2015. Fanafihana iray tao amin'ny tranombakoka National Bardo any Tunis sy fikendrena toeram-pialan-tsasatra iray hafa any Sousse no nahafaty mpizahatany vahiny 59 sy mpiambina Toniziana iray.
Saingy ny fahatongavan'ireo mpitsidika tamin'ity taona ity dia nahatratra 2.3 tapitrisa, fiakarana mihoatra ny 20 isan-jato tamin'io vanim-potoana io tamin'ny taon-dasa ary 5.7 isan-jato ambony noho ny tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny 2010.
"Ity no taona tena fanarenana," hoy i Elloumi.
Ahoana ny fomba fiasan'ny El Al Airlines ankehitriny avy any Tel Aviv mankany Auckland, Tokyo, Osaka na Seoul?